Iitattoos ezinonxantathu, phantse zingcwele kwaye zipholile kakhulu | Ukuzoba
Iitattoos ezinonxantathu, phantse zingcwele kwaye zipholile kakhulu
Nat Cerezo | | Iitatto ezinemilo
Los Iitattoo ezinonxantathu Ziyamangalisa: zintle, zihlala zincinci ngobukhulu kwaye zinobukrelekrele kakhulu, nangona bengangqinelani nomtsalane nokuba.
Ukuba ukhe wazibuza malunga nesimboli Iitattoo ezinonxantathu ngenxa yokuba ucinga ukuba banye, qhubeka ufunda!
1 Isithathu linani lomlingo
2 Oonxantathu phezulu, oonxantathu phantsi
Isithathu linani lomlingo
Isithathu linani elijongwa njengelingcwele ukusukela ekuqaleni kwexesha.: Zintathu izithixo ezenza umhlaba ngokweenkcubeko ezininzi ezinje ngesiGrike, umYiputa okanye iFenike. Ngeendlela ezintathu sahlula ixesha: langoku, elidlulileyo nelizayo. Zintathu iindawo ezinamabali emveli: intshayelelo, isiqu kunye nesiphelo. Ngapha koko, kubuKristu kukho uBathathu Emnye oyiNgcwele. Kwaye kuthiwa umntu wenziwe ngezinto ezintathu: umzimba, ingqondo kunye nomphefumlo.
¿Inombolo yesithathu inantoni yokwenza neeTattoos? Ewe, unxantathu ngumfanekiso wale nombolo ingcwele, ngetattoo yakho enokubonisa eyona ndlela ingcwele yokumela iingcinga zabantu kunye nobukho babo, indlela esiliqonda ngayo ihlabathi.
Oonxantathu phezulu, oonxantathu phantsi
Xa ukhetha uyilo lwakho, khumbula oko Ukuqhelaniswa koonxantathu nako kunokunika imikhondo malunga nokuba uzama ukudlulisa ntoni.
Ngale ndlela, unxantathu onenqaku elijonge phezulu (ngokwesiko elinxulumene nobudoda, umlilo kunye nomoya) kunokubonisa uzinzo, ukomelela kunye nonyamezelo; ngeli xesha oonxantathu benqaku elijonge ezantsi (ngokwesiko kunxulunyaniswa nobufazi, umhlaba namanzi) kubonisa ukwehla kwihlabathi lokomoya.
Siyathemba ukuba eli nqaku likunike ukuqonda malunga nokubonakaliswa kweetattoos. Khawusixelele, unayo iitatoo zale ndlela? Ngaba ubusazi isimboli sayo? Sitshele into oyifunayo ngokusishiya nezimvo, uyazi ukuba singathanda ukukufundela!
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitatto ezinemilo » Iitattoos ezinonxantathu, phantse zingcwele kwaye zipholile kakhulu
Iitatoi zenzipho, uphawu lwentlungu kunye nenkolo
Sela iitattoos, kubathandi bewhisky nevodka!